Maalinta: Noofambar 18, 2017
Guddoomiyaha Gobolka Van iyo Duqa Magaalada Murat Zorluoglu ayaa ka hadlay nalka taraafikada ee xafladda xayeysiinta tikidhada caqliga leh. Joornaalkaaga, Şehrivan, wuxuu goor dhaweyd ku soo warramay toosh ku saabsan nidaamka tareenka [More ...]
Digniinta Khabiirka Samsun Gaadiidka; Halkii Metrobus Monorail!
Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalaga Weyn ee Gaadiidka, Qorsheynta iyo Nidaamka Tareenka, nidaamyada gaadiidka ayaa loo diyaarin doonaa iyadoo la waafajinayo tikniyoolajiyadda soo koraya iyo moodooyinka cusub ee gaadiidka looga baahan yahay magaalada. [More ...]
Shirkadda gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa ee ka shaqeysa gudaha Burulaş Burulaş Duullimaadyada tikidhada duulista hawada iyo adeegga Wakaalada Socdaalka Dalxiiska Dalxiiska 17 ayaa la joojiyay illaa iyo Jimcaha Noofembar. Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Nidaamka tareenka fudud, oo qaadi doona rakaab laba tareen ayaa loo qorsheeyay inuu ku shaqeeyo buundo dul sabaynaysa howlaheedana ku bilaabay 2023. Seattle ma aha wax qariib ah oo ku saabsan mashaaricda hammiga leh. Horeba adduunka [More ...]
Isbedelka Mugla waa raaxo
Mashruuca abaalmarinta loogu guuleysto ee 'Magangalyada Gaadiidka' ee Magaalada Muğla wuxuu noqday mid ku habboon Muğla. Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee ay maareyso muwaadiniinta sida ugu raaxada badan, dhaqaale iyo isfahamka ku saleysan adeegga bulshada [More ...]
Gawaarida telefishanka ee Bursa waxay macallimiin ka qaadayaan lacag la'aan
Baabuurka fiilada, kaas oo bixinayey gaadiid kale oo u dhexeeya Uludağ iyo Bursa nus qarni, ayaa macallimiinta si bilaash ah ugu qaadaya bisha Nofembar. Maareeyaha Guud ee Inc. Ropeway Erdal O, ayuu war qoraal ah, mustaqbalka Turkey ee la tababarka macalimiinta u guban shuclada [More ...]
Istanbul-Kocaeli Goolashooyinka Gaadiidka aan kala go'ayn
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu ayaa booqday Mevlüt Uysal, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul. Duqa Magaalada Karaosmanoğlu iyo Mevlüt Uysal ayaa la kulmay laba magaalo [More ...]
Gaadiidka TCDD ayaa ku dhawaaqay ku dhawaaqista koorsada darawalka tareenka ee Kars. Goobaha salka u ah koorsada makaanikada tareenka iyo koorsada TCDD ayaa la shaaciyey. Gaadiidka TCDD Co. ku saabsan natiijooyinka codsiga koorsada makaanikada tareenka [More ...]
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan, Dhismaha garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul ayaa muujinaya sida ay ugu qanacsan yihiin, garoonka Gayrettepe'den, waxaan bilownay shaqadii nidaamka tareenka, ayuu yiri. Arslan, garoonka diyaaradaha, oo asal ahaan ka soo jeeda miinooyinka dhuxusha [More ...]
Wasiirka Arimaha Dibada: "3 Airport waa kor u kaca boqolkiiba 73"
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in heerka horumarka ee dhismaha garoonka cusub ee Istanbul uu ahaa mid lagu qancay wuxuuna yiri: "Ilaa maanta, waxaan gaarnay boqolkiiba 73 horumar." Faallooyinka garoonka diyaaradaha ee Istanbul [More ...]
Denizli, degmada Honaz ee xaafada Kaklik oo ay la socoto Tareenka xamuulka qaada ee xamuulka qaada ayaa isku dhacay madaxa-on. Shaqaalaha 3 TCDD ayaa ku dhaawacmay shilka. Marka loo eego macluumaadka la helay, shilku wuxuu ka dhacay xarunta Kaklik maanta ee 14.00. [More ...]
Tareenka la sii daayay ee sanadihii hore ee Paris ee 80
Meelaha laga tanaasulay waxay leeyihiin dowlad waqti difaacaysa. Xaaladda sixir ee boosaska la dayacay ayaa waliba ah il dhiirri gelin u leh farshaxan-yahanno fara badan. Sawir qaade Pierre Folk oo garawsaday sixirbararkaasi waa laga tagay [More ...]